traintrip Archives | တစ်ဦးကရထား Save
tag ကို: ရထားခရီးစဉ်
နေအိမ် > ရထားခရီးစဉ်
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ တစ်ဦးအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အဖြစ်, ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုတွေအများကြီးနဲ့အတူရင်းနှီးမြှပ်နှံမြို့, ဗီယင်နာတစ်ဦးလူကြိုက်များခရီးသွားဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်. သို့သျောလညျး, ဒါကြောင့်လည်းတခြားစိတ်ဝင်စားဖို့တည်နေရာကဝိုင်းတစ်မြို့ဖြစ်၏. သငျသညျဗီယင်နာကနေတစျနေ့ခရီးစဉ်များအတွက်အချိန်ရှိပါက, ဘယ်မှာသင်သည်သင်၏အာရုံစူးစိုက်မှုဖွင့်သင့်တယ်? ကျွန်တော်တို့…
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ ပူနွေးသောရာသီဥတုသေးကျော်မဟုတ်ပါဘူး. အချိန်နှင့်ယခုလတောင်ပိုင်းအီတလီသို့သွားရောက်မယ့်အကြောင်းပြချက်ကောင်းနေဆဲရှိပါသည်! တောင်အီတလီမှာအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိတယ်. တောင်ပိုင်းအီတလီမှာသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးနေရာများပါဝင်သည်; သိသိသာသာကမ်းရိုးတန်း၏လှပသောပို်, စုံလင်သောကမ်းခြေမြင်ယောင်, အလွန်နှစ်သက်ဘွယ်ကောင်းသော…
ရထားအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွား, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
5 သင်ကရထားလက်မှတ်ဘွတ်ကင် Website များအပေါ်မှီခိုနေရမည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းများ
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဆောင်းတွင်းအဆုံးသတ်အကြောင်းနှင့်နွေရာသီတံခါးမှာခေါက်နေသည်နှင့်ဤသင်သည်သင်၏လာမည့်အားလပ်ရက်စီစဉ်အခါအချိန်ဖြစ်ပါသည်. We all look foracost-effective way for traveling and if you are looking for the best way that…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဥရောပတစ်အားလပ်ရက်စီစဉ်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အချိန်ကြာနိုင်. အဆိုပါစေ့စပ်ခရီးသွားများအတွက်, ဒါကြောင့်ခရီးသွားများ၏ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးသုတေသနနှင့်နေဖို့နေရာတစ်နေရာကောက်ဖို့သိသိသာသာအချိန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုင်. သင်တို့ရှိသမျှသည်-အားလုံးပါဝင်နိုင်သို့မဟုတ်မသွားသင့်? သင်မည်သို့ရှိရမယ့်, အားဖြင့်…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ authentication စပ်နှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရသာနှင့်အတူ brimming, ကောင်းသောတရုတ်အစားအစာကိုဥရောပတိုက်တွင်လာတခါတရံခဲယဉ်းသည်. သို့သျောလညျး, သတငျးကောငျးသိသာထင်ရှားတဲ့တရုတ်လူမျိုးစားသောက်ဆိုင်ဥရောပ၌ရှိကွောငျးဖြစ်ပါသည် - သူတို့ကိုသင်ရှာတွေ့မှဘယ်မှာသိပါရန်ရှိသည်, နှင့်မည်သို့ရှိရဖို့….
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဒါဟာမတ်လအတွက်ထွက်ပေါက်စီစဉ်ဖို့သိပ်နောက်ကျမယ့်, အီစတာအလုအယက်၏ရှေ့ဆက်. ကလေးတွေအားလပ်ရက်အပေါ်ဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, ယခုချစ်ရသူနှင့်အတူ quaint ကျွန်းငယ်လေးများသို့လည်ပတ်ရန်အခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်, embark upon the first great family travel…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ခရီးသွားလာအားလုံးရှာဖွေစူးစမ်းအကြောင်း, ဒေသခံတွေစကားပြော, ဒါကြောင့်အပေါ်ဒေသခံအစာစားခြင်းနှင့်. နိုင်ငံတိုင်းရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်နောက်ထပ်ဖြစ်ပါသည်, တိုင်းပြည်၏အရွယ်အစားပေါ် မူတည်., ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောပြည်နယ်များသို့ခွဲခြားမရစေခြင်းငှါ,. နှင့်…